Indlela iindawo zokuThuthwa kweeNqwelo zeZithuthi ezisebenzayo kwiThuthi
Iimoto neekhekhi Ukuhanjiwa kawonke-wonke
by UChristopher MacKechnie
Indlela yokuSebenza ngeZithuthi (AVL) kunye neendlela ezisetyenziswa ngayo kwi-Transit Industry
I-AVL, indawo yezithuthi ngokuzenzekelayo, iinkqubo zisetyenziselwa kakhulu kwi-shishini yezothutho njengendlela yokujonga apho izithuthi zisekuhlaleni. Ngokubambisana namanani okubala ahamba ngamashishini (APCs) , iifayile ze-AVL zenza intuthuko ebalulekileyo kwezobuchwepheshe kwi-transit shishini kwiminyaka engamashumi amabini edlulileyo.
I-AVL isebenza njani
Kwiinkomfa ze-nut, iinkqubo ze-AVL ziquka izicwangciso ezimbini ezibalulekileyo: iinkqubo ze-GPS ebhodini nganye ibhasi elandelela indawo yangempela yebhasi, kunye nesofthiwe ebonisa indawo yeebhasi kwimaphu. Ngokuqhelekileyo inkqubo ye-GPS iqalelwa kuqala kwi-satelesi ize ifike kumsebenzisi wokugqibela. I-AVL idla ngokuchanekileyo ukuya kwisithuba esingamashumi amathathu sebhasi, eyaneleyo yokuhamba kodwa ingenakulinganiswa ngokuthe ngqo kwezicelo zokulandelela i-GPS, kuquka nezicelo zempi. I-AVL ye-GPS esekelwe kwikhompyutha yinto ehamba phambili yoshishino eqalise ngokubeka esweni indawo yeetroli ngokusetyenziswa kwabaguquli beendlela ezisemgangathweni ezibekwe eceleni komzila.
Ngaphambi kokuba iinkqubo ze-AVL ziphunyezwe, ulawulo lwengqondo lwangaphandle lwalukwazi ukuba yeyiphi ibhasi kunye nomqhubi ngamnye ngaphandle kokuba umqhubi ababize kwifowuni ukubika. Ngoku kwiinkqubo abaphathi be-AVL abazixhobileyo banokukwazi ukubona apho zonke iibhasi zihlala eofisini yabo, ezibanceda baphendule bhetele ukuphazamiseka kweenkonzo ezingenakulungiswa kunye nokubeka iliso kwi-intanethi yokubambelela kunye nokusebenza kwexesha.
I-AVL iye yavumela abaphathi beendlela ukuba bagxininise ngakumbi kwizenzakalo ezifana nezengozi kunye nomsebenzi wobugebengu kunye nokuncinci kwenkqubo yokujonga ibhasi.
Ezinye iinkqubo zokuthutha zisebenzisa i-AVL ukuvelisa ngokuzenzekelayo izimvo zangaphakathi zesebe zangaphandle, ezifunekayo phantsi koMthetho waseMelika okhubazekileyo.
Iinkqubo zeTransit ziyakwazi ukusebenzisa i-AVL ukubonisa ngokuzenzekelayo uphawu lokuya kwindawo efanelekileyo, kodwa le nto ingabonakalisa ingxaki xa inkqubo ye-AVL ingasebenzi, okwenzeka ngaphezu kwababoneleli be-AVL.
Ukongeza kokusetyenziswa kwangaphakathi, iinkqubo zendlela yokuhamba zibonisa ngokubanzi indawo zabo zithuthi kwindawo kawonkewonke ngokusetyenziswa kwe-intanethi-based based tracking buses, i-e-based based information information, kunye neempawu zendlela esetratweni ezibonisa ukuba zifikelele ngexesha elifikelelekileyo. kwiibhasi ezimbalwa ezizayo. I-Long Beach Transit eCalifornia iye yaba yinkokeli yoshishino kule ndawo iminyaka. Baye babonisa indawo zebhasi ezihlala kwi-intanethi iminyaka emininzi, bangeze iimpawu ezisetratweni ezibonisa ixesha lokufika elilindelekileyo elizayo eliza kuhamba ngebhasi kwiminyaka emibini edluleyo, kwaye sele befake inkqubo yocingo apho abafowunayo bafunde ukufika okulindelekileyo amaxesha amabhasi ambalwa azayo ahamba kwindawo yokumisa abafaka ngayo. I-Los Angeles Metro ibonisa indawo yangempela yebhasi ebhodini ngokusebenzisa i-TV yesikrini ebonisa iindaba, imozulu, kunye neemeko zentengiso, kwaye sele ivele yangena kwi-beta-test of system ifowuni efana neLong Beach Transit.
Iindleko ze-AVL kunye nokuPhelela
I-TCRP Synthesis 73 ngo-2008 yabika ukuba ngeenqwelo zeenqwelo-moya ezingaphantsi kwezi-750 ixabiso liyi-17,577 ye-Fleet Size ($ 600).
Ezinye izibalo zibonisa uluhlu lwama-$ 1,000- $ 10,000 ngebhasi, kunye neendleko ezongeziweyo zokugcina i-$ 1,000 ngebhasi. Le ndleko, engabonakaliyo, mhlawumbi ichaza ukuba kutheni iSebe leZithuthi lezoManyeneyo e-United States lifunyenwe ngo-2010 lafumanisa ukuba kuphela iipesenti ezingama-54 zeendlela zokuhamba ngeendlela ezizimeleyo e-United States zisebenzisa i-AVL. Iindleko, eziza kuqhubeka zinciphisa, zaxhaswa ngokucacileyo ngophando oluthole umlinganiselo weNzuzo kunye neNdleko kwiinkqubo ze-AVL eziphakathi kwe-2.6 no-25.
I-AVL, ngaphezu kwe-APC, iteknoloji ebalulekileyo kwindlela yokuhamba namhlanje. Ngelixa abashayeli bebhasi njengaye ndiyakwazi ukukhangela ixesha apho abaphathi bethu bebengayazi apho sasihlala khona, kubaluleke kakhulu kwindlela yokuhamba ukuze wazi apho izithuthi zayo zihlala khona. Iyakwazi nokuba ibaluleke kakhulu xa kwenzeka ingozi okanye ulwaphulo-mthetho apho uncediso lwesibini lulibazisekile lwandisa ithuba lokulimala okanye lokufa.
Iinkqubo zokuBala abaPhuthi (APC) Iinkqubo: Zisebenza njani?
Yintoni eyenzekayo kwiibhasi Emva kokuba ubomi babo buyimfuneko?
Iibhasi eziPhakamileyo-I-Articulated or Double-Decker?
Iibhasi zombane - Isingeniso
I-Transit Kwi-Dayton, e-Ohio
UkuThuthwa koLuntu kunye noPhuculo: iiNzuzo kunye noLondolozo